ညို့အားပြင်းတဲ့ ရွှေရင်ဖွေးဖွေးလေးတွေပေါ်လွင်အောင် ဆော့ကစားပြထားတဲ့ မေမြင့်မိုရ်ရဲ့ TIK TOK ဗီဒီယိုလေး – Online News Post
မေမြင့်မိုရ် ဟာ ပုပ္ပါးမှာ အနားယူ အပန်းဖြေ နေရင်း ရေချိုးကန် ထက်မှာ အထာ ကျကျ ရိုက်ထားတဲ့ ပုံလေး တွေ ကို သူမ ရဲ့ Instagram acc မှာ တင်ပေး လာ ပါတယ်..။ မေမြင့်မိုရ် လေး ရဲ့ အချိုး အစား ပြေပြစ် တဲ့ ဘော်ဒီ အချိုး အစားလေး နဲ့ အသား အရည် လေးဟာ လည်း မိန်းက လေးတောင် ကြွေရတာ အမှန် ပါပဲ နော်..။ကဲ…. ပရိသတ် တွေ အတွက် ပြန်လည် မျှဝေ ပေး လိုက်ပါ တယ် နော်..။ပန်းနုသွေး ဆိုတဲ့ ဇာတ်ရုပ် လေးနဲ့ ပရိသတ် တွေ စတင် သတိထားမိ လာခဲ့တဲ့ မေမြင့်မိုရ် ဟာ အခု လက်ရှိ ရုပ်ရှင် ကားကြီး တွေပါ ရိုက်ကူး နေရပြီ ပဲဖြစ်ပါတယ်..။
အမြဲ အေးအေး လေး နေထိုင် တတ် လေ့ ရှိတဲ့ မေလေး ဟာ သရုပ်ဆောင် ပိုင်း မှာ ဆိုရင် အပြစ်ပြော စရာ မရှိအောင် ကို ကြိုးစားလုပ်ဆောင် တတ် သူလေး ဆိုလည်း မမှားပါ ဘူးနော်..။မေမြင့်မိုရ် ပါဝင် ရိုက်ကူး ခဲ့တဲ့ ဇာတ်လမ်း တွေ ဟာ ဆိုရင် လည်း ပရိတ်သတ် တွေ ကြားမှာ အရမ်း ရေပန်းစား လေ့ ရှိပြီး နာမည်ကြီး တဲ့ ဇာတ်ကားကောင်း တွေ ပဲ ဖြစ်ပါ တယ်..။ မေမြင့်မိုရ် ဟာ အနု ပညာ အလုပ် တွေ အပြင် ပရဟိတ အလုပ် တွေကို လည်း လုပ်လေ့ ရှိ သူဖြစ်ပြီး အနု ပညာရှင် အချင်းချင်း ကြားမှာ လည်း ဆက်ဆံရေး ကောင်းမွန်တဲ့ သူ ဖြစ်တာကြောင့် လူချစ် လူခင် ပေါများ တဲ့သူ လေးပါ နော်..။ မေမြင့်မိုရ် ဟာ အခု လက်ရှိမှာ ဆို ရင်လည်း ပုပ္ပါးကို ရောက်ရှိ နေတာဖြစ် ပါ တယ်..။
ေမျမင့္မိုရ္ ဟာ ပုပၸါးမွာ အနားယူ အပန္းေၿဖ ေနရင္း ေရခ်ိဳးကန္ ထက္မွာ အထာ က်က် ရိုက္ထားတဲ့ ပုံေလး ေတြ ကို သူမ ရဲ့ Instagram acc မွာ တင္ေပး လာ ပါတယ္..။ ေမျမင့္မိုရ္ ေလး ရဲ့ အခ်ိဳး အစား ေျပျပစ္ တဲ့ ေဘာ္ဒီ အခ်ိဳး အစားေလး နဲ႔ အသား အရည္ ေလးဟာ လည္း မိန္းက ေလးေတာင္ ေႂကြရတာ အမွန္ ပါပဲ ေနာ္..။ကဲ…. ပရိသတ္ ေတြ အတြက္ ျပန္လည္ မၽွေဝ ေပး လိုက္ပါ တယ္ ေနာ္..။ပန္းႏုေသြး ဆိုတဲ့ ဇာတ္႐ုပ္ ေလးနဲ႔ ပရိသတ္ ေတြ စတင္ သတိထားမိ လာခဲ့တဲ့ ေမျမင့္မိုရ္ ဟာ အခု လက္ရွိ ႐ုပ္ရွင္ ကားႀကီး ေတြပါ ရိုက္ကူး ေနရၿပီ ပဲျဖစ္ပါတယ္..။
အျမဲ ေအးေအး ေလး ေနထိုင္ တတ္ ေလ့ ရွိတဲ့ ေမေလး ဟာ သ႐ုပ္ေဆာင္ ပိုင္း မွာ ဆိုရင္ အျပစ္ေျပာ စရာ မရွိေအာင္ ကို ႀကိဳးစားလုပ္ေဆာင္ တတ္ သူေလး ဆိုလည္း မမွားပါ ဘူးေနာ္..။ေမျမင့္မိုရ္ ပါဝင္ ရိုက္ကူး ခဲ့တဲ့ ဇာတ္လမ္း ေတြ ဟာ ဆိုရင္ လည္း ပရိတ္သတ္ ေတြ ၾကားမွာ အရမ္း ေရပန္းစား ေလ့ ရွိၿပီး နာမည္ႀကီး တဲ့ ဇာတ္ကားေကာင္း ေတြ ပဲ ျဖစ္ပါ တယ္..။ ေမျမင့္မိုရ္ ဟာ အႏု ပညာ အလုပ္ ေတြ အျပင္ ပရဟိတ အလုပ္ ေတြကို လည္း လုပ္ေလ့ ရွိ သူျဖစ္ၿပီး အႏု ပညာရွင္ အခ်င္းခ်င္း ၾကားမွာ လည္း ဆက္ဆံေရး ေကာင္းမြန္တဲ့ သူ ျဖစ္တာေၾကာင့္ လူခ်စ္ လူခင္ ေပါမ်ား တဲ့သူ ေလးပါ ေနာ္..။ ေမျမင့္မိုရ္ ဟာ အခု လက္ရွိမွာ ဆို ရင္လည္း ပုပၸါးကို ေရာက္ရွိ ေနတာျဖစ္ ပါ တယ္..။
Previous post ရင်ဖိုဖွယ် ကောက်ကြောင်းအလှတွေနဲ့ ပုရိသတွေရဲ့ အသည်းကို ခြွေလိုက်ပြန်တဲ့ ခေးကြီးလုရဲ့ ပုံရိပ်လေးများ
Next post ပုရိသတွေ ရှော့ရသွားစေမယ့် အမိုက်စားပုံစံလေးနဲ့ Tik Tok ဆော့ထားပြန်တဲ့ ဘေဘီမောင်ရဲ့ အလန်းစား ဗီဒီယိုလေး